China Uzo Ochie Uzo China Manufacturers & Suppliers & Factory
Uzo Ochie Uzo - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Uzo Ochie Uzo)
ETL 30W Eji Ntuchi Ochie Mmiri
N'iji uzuzu kpuchie ájá, mee nke a E26 Sodium Bulb Led Replacement a perfect lighting source in Garage, ụlọ nkwakọba ihe, Ogige ụgbọala ụgbọala, High Bay, ọkụ n'okporo ámá. Anyị na-ekwe nkwa na ị bụla High Bay na-anọchi bọl bụ rigorous ule tupu eweta ihe kasị mma ETL-depụtara LED ngwaahịa na ndị ahịa anyị....
Niile Na Otu 20W Mmiri Uhie Ochie
Niile Na Otu 20W Mmiri Uhie Ochie N'okpuru ụtụtụ, ihe niile na otu 20W anyanwụ ìhè ìhè kacha elu ga-agbanwe na-akpaghị aka ma na-enwu gbaa ọkụ na-acha ọkụ ọkụ site na mpempe mmiri mmiri ozuzo na ọkụ nke 140 lumens na ụgwọ zuru ezu. Nke a dugara Solar Post n'elu 20W ga atụgharị na-akpaghị aka mgbe anyanwụ...
20W Igwe Uhie Ochie Uhie Na-enwu Uhie
20W Igwe Uhie Ochie Uhie Na-enwu Uhie N'abalị, oghere ìhè nke 20W na-enwu gbaa na 20W ga-agbanye aka na-acha ọkụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na-egbukepụ ọkụ 140 lumens na ụgwọ zuru ezu. Nke a dugara Solar Post n'elu ga-atụgharị na-akpaghị aka mgbe anyanwụ na-aga ala na uche anya mgbe anyanwụ...
50W Ngwongwo nke Ogige Uhie Ochie
Nke a na- acha ọkụ ọkụ enwere ike iji mee ihe iji dochie anya ìhè nke anyanwụ nke ahụ mebiri emebi ma ọ bụ ebe eriri eletriki nwere nkwarụ. Nhọrọ mara mma na mmepe onwe onye, ​​obodo, ogige, na ndị nwe obodo. Nke a na-eme ka ìhè ìhè anyanwụ enwere ike iji ya mee ihe maka ụzọ ụgbọala, ụzọ ụzọ na ebe ọha na eze na ibe...
30Wenwu Uhie Ochie Ugwu Ochie
Bbier Sun Energy Light Pole bụ ihe ngwọta kachasị mma maka mkpa nchekwa ọkụ dịpụrụ adịpụ. The Light Led Street Light with Pole ejiri 30-watt (850 Lumen) oriọna ọkụ nke na-enwu ọkụ ọkụ na mpaghara 30' x 30 'na mpaghara panel nke nwere oghere na-arụ ọrụ n'ime ụlọ batrị lithium na usoro nchịkwa na-enye ọnọdụ...
DLC 150W Ogwe Ugo Ogologo Ugwu Ochie
Ebube anyị na- acha uhie uhie nwere ihe nkedo nke nwere ike imeghari na ogwe aka aka maka oghere / square pole. Ugwu Igwe Iju Mmiri a nke Iju Mmiri ahụ bụ agba ọla, ihe nro dị nro, ngwongwo nke aluminom na nkwụsị nke ọma. 4 KV Nchebe ntanye Ngwaọrụ wuru n'ime 150w Led Pole Light Bulbs , nke bụ obere akụkụ nwere...
Uzo Ochie Uzo Uhie Ochie Uzo Umu Ohu Uzo Ebube Uzo Ochie Ebube Uzo Ochie maka Ugbo Ibu Uzo Ochie Post65 IP65 30N Ugwu Ochie Uhie Ogige Ugbo Ochie